Soosaaraha Nooca Birta Shiinaha iyo Alaab-qeybiye | Meesha
Nooca birta ah ayaa had iyo jeer loo sameeyaa injineerada si loo xaqiijiyo naqshada qalabka ama mashiinka. Mestech waxay bixisaa wax soo saarka birta ah ee macaamiisha.
Nooca birtawaxaa had iyo jeer loo sameeyaa injineerada si loo xaqiijiyo nashqada qalabka ama mashiinka. Mestech waxay bixisaa wax soo saarka birta ah ee macaamiisha.
Qaybaha birta waxaa badanaa loo isticmaalaa in lagu sameeyo qaybo sax ah iyo qolofka qalabka, wayna ka qaalisan yihiin kuwa qaybaha balaastigga ah. Si loo hagaajiyo naqshadeynta loona yareeyo halista, waxaa lagama maarmaan ah in la sameeyo shaybaar noocyo ah oo loogu talagalay naqshadeynta iyo habeynta xaqiijinta ka hor soosaarka rasmiga ah.
Qaybaha birta ayaa si ballaaran loogu adeegsadaa mashiinno iyo qalab kala duwan. Badanaa waxaa loo isticmaalaa in lagu sameeyo qaybo sax ah sababtoo ah xasiloonida cabbirkooda, xoogooda iyo adkaantooda, sifooyinka heerkulka sare iyo kuwa hooseeya iyo habsami u socodka korantada, kuwaas oo aad uga sarreeya qaybaha caagga ah.
Marka la barbardhigo qaybaha balaastigga ah, waxaa jira noocyo badan oo qalab ah oo loogu talagalay qaybaha birta, sida aluminium aluminium, daawaha naxaasta ah, zinc alloy, steel, titanium alloy, magnesium alloy iyo wixii la mid ah, oo leh hanti kala duwan. Kuwaas waxaa ka mid ah, ferroalloys, aluminium, aluminium, aluminium iyo aluminium ayaa inta badan loo isticmaalaa wax soo saarka warshadaha iyo madaniga ah Qalabkan biraha ahi waxay leeyihiin sifooyin jireed iyo kiimiko oo kala duwan, iyo farsamada wax lagu farsameeyo ee qaybaha biraha oo qaabab iyo qaabab kala duwan ka duwan.
Marka loo eego maaddada iyo qaabdhismeedka qaybaha, waxaa jira noocyo badan oo wax soo saar ballaaran oo loo sameeyo qaababka qaybaha birta, sida jarista, dhimista tuurista, faaruqinta, isku darka, foorarsiga, xoqidda iyo sintering. Dhimashada-dhimista, faaruqinta, xoqida iyo xoqida, wasakhda ayaa loo isticmaalaa. Caaryadu badanaa waxay ka dhigan tahay maalgelin kharash badan, sidaa darteed goynta farsamada guud ahaan waxaa loo isticmaalaa sameynta noocooda.
Waxaa jira saddex geeddi-socod oo muhiim ah oo lagu sameeyo muunad nooc bir ah:
Badanaa waxaa loo isticmaalaa qaybaha leh saxsanaanta cabbirka sare iyo qaybo yaryar.
Qalabka ugu muhiimsan waa mashiinka wax lagu shiido ee CNC, lathe, Furimaha, EDM, WEDM iyo aaladaha kale ee mashiinka.
Hawlaha diyaaradda, dusha sare, jeexdin iyo daloolka dariiq dhexaad ah, gacmo-gacmeedka, diskiga, cuboodka iyo qaybaha biraha dusha sare ee qalooca.
Qalabka mashiinka saxda ah ee gaarka ah ayaa loo isticmaalaa in lagu farsameeyo qaybaha leh shuruudaha saxda ah ee sarreeya. Qaybaha sida geerka, ulaha fur iwm.
2. Farsamaynta birta xaashida ah
Qolofka iyo shaybaarka daboolka leh derbiga dhuuban iyo isku dhumucda meel kasta, geedi socodka biraha ayaa guud ahaan loo isticmaalaa, taas oo ah, iyada oo loo marayo mashiinka goynta laser iyo qaar ka mid ah qalabka fudud ama qalabka iyada oo loo marayo foorarin, goyn, shaabbad iyo dubba. Inta badan waxay kuxirantahay wax soo saarka gacanta.
Tusaale ahaan, guryaha, gawaarida, kumbuyuutarka iwm.
3. Dusha ka dib Daweynta
Ka dib marka la farsameeyo ama la warshadeeyo birta, cabbiraadaha aasaasiga ah iyo qaababka ayaa la helaa. Si loo helo tayada dusha sare iyo muuqaalka, daaweynta dusha sare ayaa badanaa loo baahan yahay.
A. Dhammeystirka dusha: shiidi, nadiifinta, qoraallada, xardho laser iyo samaynta.
B. Buufinta budada, koronto siinta, qayilo iyo rinjiyeynta.
Noocyada mashiinka Aluminium CNC
Tilmaam bir ah oo sax ah
Noocyada xaashida birta ahama
Adagnaanta sare, astaamaha dhibcaha heerkulka dhalaalaya ee sareeya iyo shuruudaha saxda ah ee qalabka biraha ayaa go'aamiya tiknoolajiyadooda farsamaynta oo ka duwan tan maadada aan birta ahayn (sida balaastikada) samaynta noocyo ama shaybaarro. Shirkadeenu waxay siisaa macaamiisha noocyo kala duwan oo hal-joojin ah ama soosaarida mockup iyo adeeg, oo ay ku jiraan qaybo caag ah, qaybo silica ah, qaybo bir ah iyo wixii la mid ah. Haddii aad u baahato, fadlan nala soo xiriir.
Hore: Gali wax taaj oo kale ah
Xiga: Caaryo caag ah oo loogu talagalay mashiinka saarista timaha laser
3d Nooca Daabacaadda Birta
Nooca Mashiinka Birta
Birta jediyay Qaybta noocooda
Qaybaha Birta Sheet noocooda